Hibiscus | March 2020
Ugu Weyn Ee Hibiscus
Waa maxay sababta hibiscus loo yaqaan ubax dhimasho
Shiinaha oo kor u kacay ama hibiscus waa riwaayad si fiican loo yaqaan iyo caan ah, inkasta oo xaqiiqda ah in muddo dheer waxaa loo aaneynayaa guryaha kala duwan oo qarsoodi ah. Calaamado iyo waxyaalo badan oo kala duwan ayaa la xiriira hibiscus, laakiin sidoo kale waxay leedahay sifooyin faa'iido leh. Ma taqaanaa? Ubaxa hibiscus cas waxa uu ku jiraa jaakad hubka ah ee Malaysia, iyo caasimaddeeda waxaa ku yaala Park Hibiscus qurux badan, taas oo in ka badan 2 kun dhirta ay koraan.
Sida loo daryeelo hibiscus gudaha
Hibiscus waa wakiil dhalaalaya qoyska Malvaceae, leh ubaxyo, qurux badan, ubaxyo qalafsan oo siman, calaamad u ah dhamaadka, caleemaha emerald. Waxaa lagu qaybiyey deegaan kuleyl ah. Maaddaama ay quruxdeeda quruxda badan iyo aan qabyo ahayn, waxaa si weyn loo koray ubax guri, hibiscus sidoo kale waa la cunaa, xirtaa sida qurxinta iyo xitaa loo isticmaalo samaynta rinji.
Sida loo doorto ubaxyo gudaha ah oo aan u baahnayn daryeel gaar ah
Makhaayadaha aan qabin ee lagama maarmaanka ah ayaa lagama maarmaan u ah dadka si ay u abuuraan qalab aan lagu dabooli karin guriga. Iyadoo aan luminayo tayada ugu fiican ee leh daryeelka ugu yar, ubaxyo qurxoon oo aan qabyo ahayn ayaa suurogal u ah in la sameeyo degenaansho iyo daryeel la'aan. Luqadda Sansevieria Teschin, dabaylaha Afrikanka, dabada pike - sidaas si kale loo yaqaan sansevieriya.
Xulashada dhirta ugu wanaagsan ee ilmahaaga
Qalabaynta qolka ilmo, waalid kasta wuxuu isku dayaa inuu doorto waxyaabaha ugu faa'iidada badan ee ammaanka ah. Tani waxay sidoo kale quseysaa ubaxyada gudaha ee xanaanada, sababtoo ah muddo dheer waxay noqon doonaan deriskaaga ilmo. Waxaan ka hadli doonaa sida loo sameeyo doorasho sax ah oo aan qalad u sameynin maqaalkan. Ma taqaanaa? Ilmuhu wuxuu xiiseyn doonaa oo keliya geedka laftiisa, laakiin sidoo kale dheriga uu kori doono.
Guryaha dawooyinka ee hibiscus
Maxaad u helaysaa koob shaah ah? Laakiin waxaa jira waqti marka shaaha madow iyo kuwa cagaaran ay soo baxaan, iyo waxyaabo kala duwan oo aan waxtar lahayn. Waxaa intaa dheer, shaaha cagaaran waxaa ku jira caffeine ka badan tan qaxwaha, iyo tiro badan oo xitaa waxay noqon kartaa waxyeello. Kadibna gargaarka ubaxyada noocan oo kale ah sida hibiscus. Hibiscus leeyahay dhadhan cajiib ah, midab wacan, iyo ma aha in la xuso hantida faa'iido ee hibiscus.
Dooranaya ku xoortay geedihii ugu wanaagsanaa ee la siiyo
Nidaamka ku haboon iyo isku dhafka dhirta kala duwan ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya qaabaynta muuqaalka beerta. Xirmooyin ubax ah oo si habboon loo xushay beerta ayaa ku farxi doonta isha waxayna ku qurxin doontaa guga ilaa dayrta goor dambe. Iyadoo gacan ka geysanaya ku xoortay geedihii, waad kala duwanaan kartaa beerta beerta, u qeybi dhulka iyo ku dar muqaal cusub.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Hibiscus 2020